Luzụ ahịa Influencer: History, Evolution, and the Future | Martech Zone
Ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi: nke ahụ bụ ezigbo ihe? Ebe ọ bụ na mgbasa ozi mmekọrịta ghọrọ ụzọ kachasị mma maka ịkọrọ ọtụtụ mmadụ okwu na 2004, ọtụtụ n'ime anyị enweghị ike iche ndụ anyị na-enweghị ya. Otu ihe nke mgbasa ozi mmekọrịta gbanwere maka nke ọma bụ na ọ kwadoro onye ọ bụla ga-abụ onye a ma ama, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala mara amara.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, anyị aghaghị ịdabere na fim, magazin, na ihe nkiri telivishọn iji gwa anyị onye a ma ama. Ugbu a ndị mmadụ nwere ike iji soshal midia mara nke ọma n'ọhịa ha nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ịntanetị ama maka nkuzi etemeete, enwere obodo maka nke ahụ!
Nke a pụtakwara na ndị mmadụ nwere ike ị nweta ndụ ugbu a site na iji soshal midia. Nwere ike iwulite ihe na-esote n'ime obodo, bụrụ onye amaara ama maka ihe ọmụma gị na obodo a kwuru, wee mepee onwe gị maka ohere ndị dị maka ebe ndị na-agbanwe ihe.
Otú o si ebi ndụ a enweghị ụkpụrụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụụ ọhụụ. FCC chọrọ ịgba mbọ hụ na ndị mmadụ mara na ha na-elele mgbasa ozi, yabụ na ị ga - ahụkarị Inye Ọdịnaya gbasaa gafee blog posts ma ọ bụ #ad na post Instagram.
Ka o sina dị, ndị mmadụ na-achọkarị ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta bụrụ ndị a tụkwasịrị obi karịa ndị na-ekwuchitere ndị a ma ama - 70% nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na-ekwu na Youtubers nwere ike ịkọwapụta karịa ndị a ma ama, ebe 88% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi na ntanetị dị ka ndị ha nwetara site na ezinụlọ na ndị enyi.
Iji kwuo Seth Godin, Ndị mmadụ nwere ike "ịnụ isi okwu nke onye ndu". Nke a adịtụbeghị eziokwu ma a bịa n'ịzụ ahịa mmetụta. Iji nọgide na-enwe ezigbo ndị na-eguzosi ike n'ihe, ị ga-ahụrịrị ma kwenye na ihe ị na-akwado. Mari Smith kwuru banyere John White, Olee otú ịrị elu nke ndị na-emetụta ihe dị ka Lilly Singh na Andrew Bachelor emebiela Mgbasa Ozi
Mụtakwuo banyere mmalite nke influencer site na infographic a!
Tags: onye nnọchianyandị nnọchiteanyankwanye ugwu ndị ama amammalite nke influencerinfluencerahịa ahịainfographicndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụnkwado ọdịnayandị na-emetụta youtube